बनाइरहेका थिए हृदयघातको औषधी बन्यो भियाग्रा, धोकाले बनेका ५ ‘आकस्मिक आविष्कार’
थुप्रै कुराले हाम्रो जीवनशैली मात्र परिवर्तन नगरी हाम्रो लागि आवश्यकको वस्तु बनिसकेको छ । तर यीमध्ये केही कुराहरु धोकाका कारण बनेका थिए । यसबारे कसैले अनुसन्धान नै नगरी अचानक यी कुरा सार्वजनिक भए र आज हाम्रो जीवनको अंग बनेको छ । आज हामी तपाईंलाई यस्तै ‘आकस्मिक आविष्कार’ बारे जानकारी दिँदै छौं । हृदयघातको औषधीले बन्यो […]
समुन्द्रभित्र यो जोडीले गर्यो अचम्मको विवाह, हेर्नुहोस् तस्बिर
हुन त तपाईंले थुप्रै विवाह देख्नुभएको होला तर केरलमा शुक्रबार एउटा अचम्मको विवाह..
तपाईंले यस्तो अनुहार भएका मानिस देख्नुभएको छ ? हेर्नुहोस, १० तस्वीर
मानिस राम्रो अनुहारले कि मनले ? बहस भैरहने विषय हो । सोसल मिडियामा यस्ता तस्वीर ..
जव पोशाकले दियो धोका…..हेर्नुहोस्, २१ तस्वीर
तपाईंलाई कपडाले धोका दिएको छ ? कहिलेकाही दिएको पनि होला । तर, सेलिब्रिटीले चाहिँ..
अमेरिकाको गुप्तचर एजेन्सी सीआइएको सन् १९६८ अप्रिलको एक रिपोर्टको ९ लाख ३० हजार द..
थाइल्याण्डमा एउटा ठगी यस्तो पनि
थाइल्याण्डमा मानिसहरुलाई ठगेर उनीहरुको विवाहमा संलग्न हुने र त्यसको लागि पैसा लिने आरोपमा एक बौद्ध भिक्षुकसमेत पाँचजनालाई पक्राउ गरिएको छ । ठगका यी समूहले राजपरिवारको नक्कली अधिकारी बनेर विवाहमा संलग्न हुने गरेको बताइएको छ । बैंकक नजिकको इलाकामा तीन पुरुष र दुई महिलाले ठगीको यो काम पछिल्लो थुप्रै वर्षदेखि चलाउँदै आएका थिए जसमार्..
कतै शार्क त कतै अजिंगरः सडकमा क्लिक भएका अचम्मका तस्बिरहरु
सोसल साइटमा धेरै फोटो अपलोड गरिन्छ । तीमध्ये कति धेरैको नजरमा पर्दैनन् भने कुनै रातारात भाइरल हुन्छन् । यद्यपी, यीमध्ये कुनै सामाजिक सन्देश दिने किसिमका हुन्छन् भने कुनै निकै हाँस्यास्पद । तर केही फोटोहरु निकै अचम्मका हुन्छन् जसलाई विश्पास गर्न मुश्किल पर्छ । आज हामी तपाईंलाई यस्तै फोटो देखाउँदैछौं ।
यी तस्बिर हेरेर तपाईंले आफ्नो आँखामा विश्वास गर्नु हुनेछैन
फोटोग्राफर एउटा यस्ता व्यक्ति हुन् जसले आफ्नो वरिपरिका सबै कुरामा नजर डुलाइरहेको हुन्छ । ऊ एउटा यस्तो आशावादी व्यक्ति हुन् जो भयानक परिस्थितीहरुमा पनि एउटा फोटो स्टोरी देखाउँछन् । र उनको यो चुनौतीमा एउटा कुराले सधैं उनको साथ दिइरहेको हुन्छ, त्यो हो प्रकृति । यहाँ हामी यस्ता केही तस्बिरहरु देखाउँदै छौं जसले प्रकृतिले आफू भित्र [..
संसारको पहिलो रेष्टुरेन्ट जहाँ नग्न भए मात्र छिर्न र खान पाइन्छ
पछिल्लो वर्षको जून ११ तारिखमा यो रेष्टुरेन्टलाई संसारसामू सार्वजनिक गरियो । तपाईंलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला रेष्टुरेन्ट खोल्नुभन्दा पहिले नै करिब ४० हजार मानिसले नाङ्गो भएर खाना खाने अनुभव बटुल्नका लागि रेष्टुरेन्टको टेबल बुक गरेका थिए । हो, यो रेष्टुरेन्टमा ती मानिसहरुलाई मात्र प्रवेश दिइन्छ जो पूर्ण रुपमा नग्न हुन्छन् । यतिमात्र ..
अचम्मका हेयरस्टाइलिष्टः जसले कपाल काट्दैनन्, आगो लगाउँछन् (भिडियो)
कपाल काट्न झन्झटिलो हुने भएकाले कुनै बेला कपाललाई छोट्याउनका लागि आगो लगाइन्थ्यो तर एक हेयरस्टाइलिष्टले आफ्ना क्लाइन्टको टाउकोमा आगो लगाउने गर्दछन् – कपाल कोर्न सजिलो होस् भनेर । उनको यो शैलीले उनलाई रातारात संसारमाझ परिचित बनायो । साफ्कत राजपुत पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा बस्ने एक हजाम हुन् । उनले आफ्ना क्लाइन्टको कपालमा आगो ल..
श्रीमान् र प्रेमीबाट गर्भवती नभएपछि महिलाले उठाइन् यो भयानक कदम
आमा बन्नु यो संसारको हरेक महिलाको लागि सबैभन्दा खुसीको पल हो । तर अष्ट्रियाकी एस्टिब्लिज क्यारेन्जले जब यो खुसी पाउन सकिनन् तब उनले जुन कदम उठाइन् त्यो निकै डरलाग्दो थियो । आइक्रिम पार्लर चलाउने एस्टिब्लिजलाई आमा बन्ने सबैभन्दा ठूलो इच्छा थियो । तर विवाहको थुप्रै वर्ष पश्चात् पनि जब उनी गर्भवती हुन सकिनन् तब उनले […]
अनुहार नदेखाउने यी युवतीका इन्स्टाग्राममा लाखौं फलोअर्सः यसैबाट लाखौं आम्दानी, दिलायो जागिर
फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत सोसल मिडियामा सफल हुनु त्यति गाह्रो मानिँदैन जब तपाईं एक सफल कलाकार वा सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ तर तपाईंसँग मिलेको अनुहार, सुगठित शरिर छ भने पनि तपाईं यसमा चर्चित हुनसक्नुहुन्छ । यस्तैमा, पोल्याण्डकी एक २० वर्षीया किशोरीको सोसल मिडियामा लाख फलोअर्स छन् । यहाँ अचम्मको कुरा के छ भने उनले आफ्नो सबै फोटोमा अनुह..
जसले मात्र पाँच वर्षको उमेरमा जन्माइन् स्वस्थ छोरा
अहिलेको युगमा विज्ञानले निकै सफलता हात पारिसकेको छ । यद्यपी, विज्ञानको अहिले पनि केही यस्ता सीमा छन्, कुनै कुरा यस्ता छन् जो विज्ञानको परिधिबाट आज पनि निकै टाढा छन् । केहि दिन अघि बेलायतको हाई स्कूलमा पढ्ने एक किशोरी १२ वर्षको उमेरमा आमा बनिन् भन्ने समाचार आयो । हुन त उनलाई बेलायतमा सबैभन्दा कम उमेरमा […]
१८.९ इन्चको यौनाङ्ग भएका व्यक्ति भन्छन्, ‘यसले मलाई असक्षम बनायो’
संसारको सबैभन्दा लामो यौनाङ्ग भएका व्यक्तिले आफ्नो यौनाङ्गकै कारण काम गर्न नसकेको बताएका छन् । रोबर्टो इस्क्विभेल क्याब्रेराका अनुसार उनको १८.९ इन्चको यौनाङ्गले उनलाई राज्यबाट पाइने सुविधामाथि भर पर्न बाध्य बनाएको छ । यद्यपी, मेक्सिकोको साल्टिलोका ५४ वर्षीय उनले यौनाङ्गको आकार घटाउन अस्विकार गरेका छन् । सन् २०१५ मा प्रमाणको रुपम..
नाइजेरिया – युवतीहरुलाई घरपालुवा जनवारजस्तै सिक्रीमा बाँधेर हिँड्ने नाइजेरीको लागोसस्थित एक नाइटक्लबको मालिक माइक इजे–नवाली न्वगु पक्राउ परेका छन् । प्रटी माइक भनेर चिनिने न्वगुले युवतीहरुलाई ‘घरपालुवा जनवार’ बनाएर विगत एक वर्षदेखि हिँड्दै आएका थिए । उनलाई गत वर्ष एक विवाहको पार्टीमा यसरी युवतीलाई ल्याएको पहिलो पटक देखिएको थियो ..
तपाईं कस्तो बुवा-आमा ? १२ तस्वीरमा हेर्नुहोस्
अभिभावक बच्चका लागि कति महत्वपूर्ण हुन्छ, यो बताईरहनु पर्ने विषय होइन । तर, सोसल मिडियामा कहिलेकाही यस्ता तस्वीर देखिन्छन्, अभिभावकलाई आफ्ना बच्चाप्रति धेरै चिन्ता देखिदैन । तपाईंले पनि यस्तो त गर्नुभएको छैन होला ? हाँसो लाग्दा तस्वीर, हेर्नुहोस् ।
तपाईं यी ट्वाइलेटमा पस्नुभयो भने ….(हेर्नुहोस्, १३ अनौठा तस्वीर)
आजकल सोसल मिडियामा संसारका अचम्म लाग्दा ट्वाइलेटका तस्वीर सार्वजनिक भएका छन् । तपाईंले यस्ता ट्वाइलेट यस अघि देख्नुभएको छैन होला । हेनुहोस्, अनौठा ट्वाइलेट । कुनै ट्वाइलेटको डिजाइन अनौठो छ, त कोही हेर्दा नै अमच्च लाग्दा । कतिपय तस्वीर जापानका हुन भने कतिपय स्वीजरल्यान्डका । ती बाहेक अन्य देशका ट्वाइलेटका तस्वीर पनि यहाँ छन् । [..
यी हुन सवैभन्दा खतरनाक १० सेल्फी (तस्वीर)
1–बाटर फलको मुहानमा खतरनाक सेल्फी 2–एक महिलाले सेल्फी लिनका लागि धेरै उचाईबाट पानीमा हाम फालिन । 3–जेम्स क्रोलेट हनिमुनमा थिए । आफ्नो घर फर्कने तयारीमा थिए । समुन्द्रमा सेल्फी लिने विचार आयो । सेल्फी लिदालिदै शार्कको हमलामा परे । पछि धेरै रगत बगेर उनको मृत्यु भयो । 4–जस्टिनले अस्टेलियमा उटसँग सेल्फी लिन खोजे । उटले […]
आफन्तले बलात्कारको कोशिस गरेपछि किशोरीले गरिन् ‘लाइभ’ सुसाइड
फ्लोरिडा – एक १२ वर्षीया किशोरीले लाइभ भिडियो प्रशारण गर्दै आत्महत्या गरेकी छिन् । हजारौँले हरेको उक्त भिडियोमा केटलिनले आफ्नै परिवारको सदस्यले आफूमाथि यौनहिंसाको प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै झुण्डिएर ज्यान दिएकी थिइन् । ती किशोरीले लाइभ स्ट्रिमिङ एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलबाट आत्महत्याको प्रशारण गरेकी थिइन् । उनको मृत्यु..
पाकिस्तानी ‘हल्क’ : हातले रोक्छन् ट्रयाक्टर, दैनिक ३६ वटा अण्डा, ३ किलो मासु खान्छन्
मरदान – तपाइँलाई ‘हल्क’ भनेर हलिउड सुपरहिरोको चलचित्र याद छ ? याद छ भने पक्कै पनि चलचित्रमा हल्कले खाली हातले कार रोक्ने र उठाएर फाल्ने गरेको सम्झनुहुन्छ होला । ठीक यस्तै चरित्र हल्कको पाकिस्तानी भर्सनमा पाउन सकिन्छ । २५ वर्षीय अरबाब खिजेर हायात आफ्नो हातले ट्रयाक्टरलाई रोक्न सक्छन् भने दुईवटा कारलाई तान्न सक्छन् भने एक [&helli..
मृत्युमाथि विजय प्राप्त गरेका ७ रोचक घटना, जब मानिसले अन्तिम अवस्थामा पनि हार मानेनन्
समुन्द्रमा एक महिनादेखि हराइरहेका न्यूजिल्याण्डका एक व्यक्ति आफ्नी ६ वर्षीया छोरीसँगै अष्ट्रेलिया पुगे । सम्पूर्ण खतरासँग जुधेर एलेन ल्याङ्गडोन र उनकी छोरी क्यूले आफ्नो ज्यान बचाए । मृत्युमागि विजय प्राप्त भएका यो एक्लो र पहिलो घटना होइन । योभन्दा पहिले पनि जीवित व्यक्तिका खतरनाक घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । १ महिना समुन्द्रको ब..
स्यालको आहारा (फोटोफिचर)
दक्षिण अफ्रिका – जंगलको जीवन निकै संघर्षपूर्ण हुन्छ । बाँच्नका लागि त्यहाँ जनवारहरुले अर्को जनवारलाई आहरा बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कसैको शिकार गर्न त्यति सजिलो भने छैन । केही समयअघि एउटा स्यालले आहारा पक्रन गरेको संघर्षलाई एक व्यक्तिले आफ्नो क्यामारा कैद गरेका छन् । ५१ वर्षीय जोहान बर्नाड आफ्नो परिवारका साथ कगालागाडी ट्रान्सफ्रन्..
नयाँ वर्षमा २१२ किलोको माछा लिलामी, ६.६६ करोडमा बिक्रि
यदि तपाईंलाई माछा खाने शौख छ भने टूना फिशको नाम अवश्य पनि सुन्नुभएको होला । खानाको परिकारको रुपमा यो सबैभन्दा महँगो माछामा गन्ती हुन्छ । जापानी आफूलाई मनपर्ने खाना सुशीमा यो समुन्द्री खानालाई प्रयोग गर्ने गर्दछन् । जापानको राजधानी टोकियोमा यही टूना माछालाई लिलामीमा राखियो । २१२ किलोको यो ब्लूफिन टूना फिशलाई ६ लाख १४ […]
प्रेमीसँग कुकुरको हाउभाउमा घुम्छिन् यी महिला, घाँटीमा बाँधिराख्छिन् पट्टी
संसारभरी यस्ता अचम्मका मानिसहरु छन् जसबारे थाहा पाउँदा तपाईं अचम्मित हुनुहुनेछ । यस्तै अचम्मका मानिसहरुमध्ये एक छिन् न्यूयोर्कको स्टेटन आइल्याण्डमा बस्ने २३ वर्षीया अन्ना तेसू । सुन्दा अचम्म लाग्ला तर उनलाई कुकुरजस्तै बस्न मनपर्छ । यसकारण उनी आफ्नो गलामा पट्टी बाँधेर घुम्ने गर्दछिन् । यद्यपी, पछिल्लो केहि दिनदेखि उनी गायब छिन् ।..
भाइरल भयो गर्भवती महिलाका यी अनौठा १५ तस्बिर
सोसल साइट्समा आजकाल गर्भवती महिलाका केही तस्बिरहरु भाइरल भइरहेका छन् जुन हेर्दा निकै अचम्मका छन् । यीमध्ये कोही महिला रुखमा सुतिरहेका छन् भने कोही आफ्नो परिवारसँग मस्ती गरिरहेका छन् । आज हामी तपाईं संसारभरका त्यस्ता तस्बिर देखाउँदैछौं जुन महिला गर्भवती भएका बेला खिचाइएको थियो ।